Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0813 lak
Andriamanitra no tanjatsika
Alakamisy 23 May
“Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, ary tsy misy voany ny voaloboka, na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva, ary tsy mahavokatra hohanina ny saha, … Nefa izaho dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany sy hiravoravo amin'Andriamanitry ny famonjena ahy. Jehovah Tompo no tanjako, ary manao ny tongotro ho toy ny an'ny dieravavy Izy ka mampandeha ahy any amin'ny havoanako.” (Hab. 3:17–19)Inona ny fihetsika tsara asehon’ny mpaminany eto? Fomba ahoana no ambolentsika toe-tsaina tahaka izany ihany koa? Jereo ihany koa ny Fil. 4:11.
Mampiseho ny valin-teny nasetrin’i Habakoka ny fanehoan’Andriamanitra ny heriny sy ny fahatsarany ireo teny farany ao amin’ny bokiny (Hab. 3:16–19). Nanao jery todika ny asam-panavotana nataon’Andriamanitra i Habakoka ka nampitsiry herim-po tao aminy izany teo am-piandrasany ny fanafihan’ny fahavalo. Nangorohoro fatratra ny tao anatiny teo am-piandrasany ny fitsaran’Andriamanitra hihatra amin’ny fireneny. Ny fanafihana dia mety hanimba ny aviavy sy ny ôliva, izay hazo omena tombam-bidy ambony tokoa any Palestina, mbamin’ny voaloboka sy ny vary eny an-tsaha ary mety handringana ny omby ao am-pahitra ihany koa. Kanefa tsy voahozongozon’izany ny finoana mafy orina nananan’ny mpaminany Habakoka satria nahazo fahitana momba Ilay Andriamanitra velona izy.
Fantatr’i Habakoka tamin’ny alalan’ireo fanandramana niainany teo aloha ny fahatokian’Andriamanitra tanteraka. Izany no nampionona azy ka nanekeny ireo fikasan’Andriamanitra ankehitriny (Hab. 3:16–19). Koa na dia teo aza ireo toe-javatra rehetra mahaketraka, dia tapa-kevitra ny mpaminany Habakoka fa hametraka ny fitokisany amin’i Jehôvah sy ny fahatsarany, na dia toa tsy misy antenaina aza, araka ny fahitana azy, ny toe-javatra iainany.
Niandry tamim-pahatokiana feno finoana i Habakoka, na dia tsy hita soritra avy hatrany aza ireo famantarana manambara famonjena. Mpaminany izy, izay nampianatra ireo olona mahatoky mandritra ny taranaka mifandimby mba hikolokolo ho lalina kokoa ny finoana velona Ilay Mpanavotra, ka tamin’ny alalan’ny resaka ifanaovana sy ny fanebahana ary ny hira fiderana no nanomezany izany fampianarana izany. Ny ohatra napetrany no entiny mampirisika ireo olona tia vavaka mba hifampiresaka amin’Andriamanitra, hizaha toetra ny fahatokian’izy ireo Aminy amin’ny fotoan-tsarotra, hikolokolo fanantenana an’i Jehôvah, ary hidera Azy ihany koa.
Faranan’i Habakoka amin’ny fampisehoana finoana amin’ny fomba kanto dia kanto ny bokiny: Na dia mety ho sarotra toa inona aza ny fiainana dia mbola afaka mahita fifaliana sy tanjaka ao amin’Andriamanitra isika. Ny hafatra ambadika voarakitra ao amin’ny bokiny dia manondro hoe ilaina ny miandry amim-paharetana ny famonjen’Andriamanitra ao anatin’ny vanim-potoan’ny fampahoriana izay toa tsy misy fiafarany. Mibahana ao amin’ny bokin’i Habakoka io lohahevitra hoe “miandry an’i Jehôvah” io. Moa tsy tokony hisy lanjany amin’ny fomba manokana amintsika Advantista mitandrina ny andro fahafito izany lohahevitra izany – dia isika indrindra izay mitondra anarana maneho ny finoana ny fiavian’i Jesôsy fanindroany?